Yonke into ofuna ukuyifumana malunga nesfishfish | Ngeentlanzi
Kukho izigidi zeentlobo zeentlanzi elwandle kunye neendlela ezininzi zokudada. Kukho abo bangakwaziyo ukudada kakuhle, abanye badada ngendlela ekhethekileyo kwaye abanye banesantya esingakholelekiyo. Namhlanje siza kuthetha ngeentlanzi ezinendlela yokubhukuda emangalisa ngokwenene. Imalunga neseyelfish. Ngomphambili wayo oqhelekileyo onobukhulu obukhulu, le ntlanzi inokudada ngesantya esiphezulu xa ikhangela ixhoba layo okanye ibalekele iintshaba zayo.
Ukuba ufuna ukwazi yonke into enxulumene nale ntlanzi, qhubeka ufunde 🙂
1 Iimpawu zesailfish
I-sailfish, enegama lenzululwazi Istiophorus albicans, yafunyanwa okokuqala ngo-1792 kwaye ithathwa njengendidi evela kuLwandlekazi lweAtlantic. Kukwaziwa njengeentlanzi zasemarlin. Ngaba unolwazelelelo enye yeentlanzi ezintle kakhulu onokuyifumana kwiilwandlekazi nakwiilwandlekazi kwihlabathi liphela.
Kukho enye iindidi ezihlala kwiilwandle zaseIndiya nasePacific kwaye zibizwa I-Istiophorus platypterus. Zombini ezi ntsapho zinemibala eluhlaza okwesibhakabhaka okanye engwevu kunye nesisu esimhlophe. Iintlobo zeAtlantic zincinci.
Enye into ekhethekileyo yale ntlanzi ngumphunga wayo. Inobume obungaqhelekanga, obufikelela kwinqanaba. Ifana nesaber ebukhali. Xa le ntlanzi isebenza, iyachukumisa indlela edada ngayo ngesantya esiphezulu ikhangela ixhoba layo. Ngenxa ye-morphology yayo, inokucoca amanzi ngokulula okungaqhelekanga. Ke ngoko, inokufikelela kwisantya esikhulu.
Isiphelo sokuqala sasemva yeyona nto iphambili eyenza ukuba yahluke kwezinye iintlanzi, ibe phakathi kwemitha engama-37 ukuya kuma-49. Isiphelo sesibini sokugqibela sincinci kwaye sinemitha emithandathu okanye esibhozo kuphela. Umsila yinto ebalulekileyo eyisebenzisayo ukufikelela kwizantya eziphezulu kuba imanyaniswe yintsimbi eyomeleleyo nenamandla ye-caudal peduncle.
Unokufumana iisampulu zentlanzi enobunzima obuziikhilogram ezili-100. Eyona nto iqhelekileyo kukuba zijikeleze i-50 kg.
Le ntlanzi ihlala kulwandle oluphezulu. Abahlali bahlala ezinzulwini kwaye bahlala bekhetha amanzi ashushu afudumeleyo. Kwindawo apho zisasazwa khona, kulula kakhulu ukufumana ixhoba labo. Ngombulelo kwisantya abahamba ngaso, umsebenzi wabo wokufumana ukutya awukho nzima kakhulu.
I-Atlantic seilfish iyahluka ngokoluhlu lwazo ngokuxhomekeke kubushushu bamanzi kwaye kwezinye iimeko iimeko zendlela kunye namandla omoya. Kwindawo ezigabadeleyo zoluhlu lwayo (emantla nasemazantsi) kubonakala kuphela kwiinyanga ezifudumeleyo, kuba ikhetha amanzi ashushu. Utshintsho kwindawo ezihlala kuyo ikakhulu zibangelwa kukufudukela kwelinye ilizwe kwezinye iindawo. Ke ngoko, ukuze baqhubeke nokondla, kufuneka bahambe.
Zifumaneka ngokubanzi kwiindawo ezifudumeleyo neziphezulu ngaphezulu kwe-thermocline. Xa kufuneka ifuduke, yenjenjalo emanzini akufutshane nonxweme. Ubushushu obufanelekileyo buphakathi kwama-21 nama-29 degrees. Ngamaxesha athile, kuye kwafunyanwa amaqhekeza eentlanzi zaselwandle kuLwandle lweMeditera oluye lwalahleka ngexesha lokuhamba kwabo.
Kwelinye icala, i-Indian-Pacific seaffish ifumaneka ngokubanzi kumanzi ashushu kunye nakuma tropical olwandle lonke. Ukuhanjiswa kwayo kuyitropiki, kodwa inokufumaneka nakwindawo zeikhweyitha. Olu hlobo lufumaneka kuyo yonke imimandla eselunxwemeni yeendawo ezishushu eziphakathi, nangona zinokufumaneka nakwiindawo ezisembindini wolwandle. Ziintlobo zeepipelargic. Oku kuthetha ukuba bachitha uninzi lobomi babo babadala kwindawo ephezulu ye-thermocline.
Le ntlanzi itya kakhulu kwaye ithathwa njengenye yezona zilwanyana zinezilwanyana ezinobuchule elwandle. Alithandabuzeki elona libaleka kuwo onke amanzi ashushu afudumeleyo.
Ihlala itya iskwidi, octopus, ityhuna kunye nentlanzi ephaphazelayo. Ingasebenzisa umlomo wayo ukususa iiseli zentlanzi kwisikolo siphela, ibenze babe sesichengeni sokubanjwa. Bayakwazi ukuntywila ukuya kuthi ga kwiimitha ezingama-30 ubunzulu, kodwa bakhetha ukuyenza kufutshane nomphezulu ukuze bazincede ngelanga. Ime kufutshane nemiphetho yekorale ukuze ibenombono obanzi wendlela kwaye ikwazi ukujonga ikhoboka layo.
I-sailfish luhlobo oluhlala lodwa (yiyo loo nto kulula ukuba ufuduke ngokukhangela ixhoba). Kunqabile ukuzibona ngokwamaqela, nangona ngamanye amaxesha zinokubonakala ngokwamaqela amancinci ukulungiselela ukuzingela.
Luhlobo oluququzelela kwaye luvavanye umhlaba kuqala ngaphambi kokuqalisa ukuzingela ukunqanda imiqobo enokubakho.
Amadoda nabasetyhini banendlela efanayo yokuziphatha, ejikeleze ixhoba kunye nokunyanzela isikolo ukuba sivale iirenki. Ukugxotha kuyakhawuleza kwaye kuchanekile, nganye nganye yandulelwa kukumiswa okumangalisayo komqolo, okungaphezulu kokuphinda kabini iphrofayili yomzingeli.
Ukuveliswa kwakhona kweentlanzi zineempikiswano ezininzi. Imazi izala amatyeli aliqela kwakuloo nyaka. Indawo abakhetha ukuyizalela ihlala iyindawo apho ubushushu bujikeleze ama-26 degrees celcius. Bahlala bekwenza oko kunxweme. Ngalinye lokubeka elenziwa ngumfazi zibeka amaqanda angaphezu kwesigidi aphoswayo. Indoda, akuba amaqanda ekhululwe, kwangoko ifakela uninzi lwamaqanda.
Ukusuka kumaqanda akwaziyo ukuchumisa, kuphuma amantshontsho amancinci ahlala edada ngaphezulu, abe lixhoba elilula kumarhamncwa. Ke ngoko, kwizigidi zamaqanda ezikhutshwa ngumfazi, ambalwa kuphela akwazi ukuphila ukuze akhule abe ngabantu abadala.
Iifry ezisencinci zikhula ngokukhawuleza okukhulu, ukuba ziyakwazi ukusinda kwinqanaba lokuqala apho ziyinyama entsha kumarhamncwa, ziya kuba nakho ukufikelela kwinqanaba labo labantu abadala. Amaphiko azo iphuhliswe ngokupheleleyo xa zifikelela kwiisentimitha ezintlanu ubude.
Ezona nyanga zidala rhoqo ziphakathi kuka-Matshi no-Okthobha. Xa iintlanzi zingabantu abadala, ezona ntshaba zabo zixhaphakileyo ziintlanzi ezinkulu ezinje ngookrebe.
Ngolu lwazi ungafunda okuninzi malunga neyona ntlanzi intle kakhulu ezilwandle.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Intlanzi » I-Sailfish